US / 40A (9.6KW) Mpanamboatra sy mpamatsy | China US / 40A (9.6KW) Factory
Mpivarotra tsara indrindra fivarotana US Type 1 EV Home Level 2 Charger, EV Charging Station, mandray an-tanana fotoana mety hiarahana aminao izahay ary manantena ny hanana fahafinaretana amin'ny fametahana antsipiriany bebe kokoa momba ny entanay. Ny kalitao tsara, ny vidin'ny fifaninanana, ny fandefasana fotoana sy ny serivisy azo ianteherana dia azo antoka. Ho an'ny fanadihadiana bebe kokoa dia tokony tsy hisalasala hifandray aminay ianao.
EV Charging Box EV Charger ho an'ny fiara elektrika 40A Type 1 Plug
Ny charger Joint EVC10 EV no lohanay an-trano vaovao farany sy haingana indrindra ary mandroso hatramin'ny 50 amps ary manampy hatramin'ny 37 kilaometatra mitondra fiara isaky ny adiny iray. Ny tobim-pitsaboana EVC10 EVSE dia azo apetraka mba handoavana vidiny 16 amp hatramin'ny 50 amp, ahafahan'ny mpamily misafidy ny hafainganana mety ho azy ireo sy ny famatsiana herinaratra an-tranony. Ny Public Charge Point dia azo apetraka amin'ny alàlan'ny herinaratra, na anaty trano na an-kalamanjana, handoavana vidiny 16A ka hatramin'ny 50A, ary miaraka amina tariby miisa 18/25-tongotra ary na plug NEMA 14-50 na 6-50.
Manamboara US Unit EV Charger ho an'ny fiara elektrika miaraka amin'ny karazana 1
Mpanamboatra fenitra Sina SAE J1772, Type 1 Plug, Manantena izahay fa hanana fiaraha-miasa maharitra amin'ny mpanjifanay. Raha liana amin'ny iray amin'ireo vokatrao sy ny vahaolana izahay dia aza misalasala mandefa fanontanina aminay / anaran'ny orinasa. Izahay dia manome antoka fa afaka afa-po tanteraka amin'ny vahaolana farany tsara indrindra ho anay ianao!
New Arrival China China EV Charging Point, EV Charging Infrastructure, Faly izahay nanome ny vokatray sy ny vahaolana amin'ny mpankafy fiara rehetra eran'izao tontolo izao miaraka amin'ny serivisy mahomby sy haingana ary ny fenitra fifehezana kalitao henjana izay nankatoavinay sy noderainay hatrany mpanjifa.